ဘာကြောင့် Keyboard တွေက ABCDEF အစဉ်လိုက်မဖြစ်တာလဲ - PX
ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် Smartphone တွေမှာ အသုံးများသလောက် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ မစဉ်းစားမိကြတဲ့ အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “ဘာကြောင့် Keyboard တွေပေါ်က စာလုံးတွေဟာ A to Z အစဉ်လိုက်ရှိမနေတာလဲ” ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။
ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေကြတဲ့ Keyboard တွေကို QWERTY Keyboard လို့ ခေါ်ပါတယ်။ QWERTY ဆိုတာ Keyboard ပေါ်မှာ စီရီထားတဲ့ Alphabet တွေရဲ့ ပထမဆုံး စာလုံး ၅ လုံးကို ရည်ညွှန်းပြီး အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် A to Z ကို အစဉ်လိုက်စီပြီးထားရမယ့်အစား ဘာကြောင့်ခုလို တောင်တစ်လုံး၊ မြောက်တစ်လုံး စီထားရသလဲ?
သူ့ရဲ့ရာဇဝင်ကို နောက်ကြောင်းပြန်လှန်ရရင် ၁၈၇၄ ခုနှစ်ကနေ စတင်တယ်ဆိုရမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီနှစ်ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးစာရိုက်စက်ကို Christopher Shoals ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေ စတင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ခုနှစ်မို့ပါ။ သူ့ရဲ့ စာရိုက်စက်မှာ ဒီနေ့ခေတ်သုံးနေတဲ့ QWERTY Keyboard ရဲ့အခြေခံလက်ကွက်စနစ် ပါဝင်ခဲ့တယ်။ (အဲဒီခေတ်က ကွန်ပျူတာဘာညာမရှိသေးတော့ Ctrl, Tab, Windows Key စတာတွေတော့ မပါသေးဘူးပေါ့နော) ဒါဆို Shoals က ဒီလက်ကွက်စနစ်ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ?
သူ့ရဲ့ စာရိုက်စက်တွေကို ပထမဆုံးစမ်းသပ်သုံးစွဲခဲ့တဲ့သူအများစုဟာ ကြေးနန်းရိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Morse Code လို့ခေါ်တဲ့ လေထဲကလာတဲ့ ကြေးနန်းသင်္ကေတတွေကို ချက်ချင်းဘာသာပြန်ရတဲ့သူတို့တွေအတွက် A to Z အစဉ်လိုက် စီထားတာဟာ စာလုံးနေရာအထားအသိုကို မှတ်ရခက်စေတယ်လို့ Feedback ပြန်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် Shoals ဟာ သူတို့ရဲ့စာရိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အဆင်ပြေအသားကျအောင် QWERTY လက်ကွက်စနစ်ကို သူ့ရဲ့စာရိုက်စက်တွေမှာ ဖန်တီးထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဒီလက်ကွက်စနစ်ကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူတွေရော မရှိခဲ့ကြဘူးလား?
QWERTY Keyboard ကိုယှဉ်ပြိုင်မယ့် စနစ်တစ်ခုဖြစ် DVORAK ဆိုတဲ့ လက်ကွက်စနစ်ကို Dr.Dvorak ဆိုသူကနေ ၁၉၃၀ ခုနစ်မှာ ဖန်တီးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူက စာရိုက်တဲ့အခါ အများဆုံးသုံးဖြစ်တဲ့ A, O, E, U, H, T, N, S စတဲ့စာလုံးတွေကို စာရိုက်တဲ့အခါ လက်တင်လေ့ရှိတဲ့ လက်ရှစ်ချောင်းနေရာမှာ အဓိကထားပြီး စနစ်သစ်ကို ဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့စနစ်သစ်ဟာ စာရိုက်ရာမှာ ပိုပြီးလွယ်ကူမှတ်မိစေတဲ့ စနစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နှစ် ၅၀ ကျော်လောက် QWERTY စနစ်နဲ့အသားကျနေတဲ့ စာရိုက်သူတွေရဲ့စိတ်အစွဲကိုတော့ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း QWERTY စနစ်ဟာ ယနေ့တိုင် စံအဖြစ်သုံးနေဆဲ လက်ကွက်စနစ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ဒါဆိုရင် Smartphone တွေမှာရော လက်ကွက်စနစ်အသစ်တွေ ပြောင်းသုံးလို့မရလို့လား လို့မေးစရာရှိပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ PC တွေမှာခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့စနစ်တစ်ခုအစား နောက်ထပ်စနစ်သစ်တစ်ခုကိုှ Smartphone တွေပေါ်မှာ ဘယ်သူကများသုံးချင်ကြဦးမှာလဲလို့။ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ လူ့စိတ်အစွဲဆိုတာ ပိုကောင်းတဲ့အသစ်သစ်သော ပစ္စည်း၊ နည်းလမ်းတွေပေါ်လာသည့်တိုင် ပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲတတ်ကြတယ်ဆိုတာ QWERTY စနစ်က သက်သေပြလို့နေပါတော့တယ်။